polisy – Page 2 – Midi Madagasikara
Antsirabe : “Gilet” nozairina nasiana rongony
Redaction Midi Madagasikara 22 février 2014 Antananarivo, Antsirabe, polisy, rongony, taxi-brousse, Tombontsoa
Lehilahy nitondra rongony iray indray no saron’ny polisy ny alarobia 19 Febroary lasa teo, tao Tombontsoa. Tsy kely làlana tokoa ny ratsy fa dia mahita hevitra hatrany hanaovana asa maloto. Fisavana mahazatra fanaon’ny mpitandro filaminana no nahatratrana ity lehilahy ity. Nandeha fiara “taxi-brousse” hihazo an’Antananarivo izy no izao saron’ny polisy izao. Nandritra ny fisavana nato…
Antsirabe : Jiolahy niantso polisy !
Redaction Midi Madagasikara 21 février 2014 Ampatana, Antsirabe, Jiolahy, polisy
Hafakely ity zava-nitranga ity. Vao mangiran-dratsy, bandy efa-dahy no nifamaly sy nitabataba tao amina toerana iray mangingina tao amin’ny fokontany Ampatana-Antsirabe. Ny alarobia lasa teo no nitrangan’ity fifamaliana ity. Teny ratsy variraraka no nanaitra ny mponina manodidina ka tonga nijery ny zava-nisy. Indreo izy efa-dahy, tsy nifanara-tsaina tamin’ny fizarana ny entana vao avy nangalarina. Raikitra…